Packaging Box - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Packaging Box)
ohiri isi jiri igbe ele jeverry
Min. Nhazi: 1000 Bag/Bags
Idgbọ na-acha uhie uhie na obere igbe na-acha uhie uhie Igbe na Pillow, igbe nche dị elu nwere mkpuchi, ya na ohiri isi.Ọ na-ele anya. Igbe ndi Red Watch, akara ngosi edeputara nke oma na imecha, ihe puru iche maka igbe nlekere. Igbe onyinye maka elekere, ihe nkwakọ ngwaahịa dịka onyinye, igbe dị mma. Liyang Paper...
Igbe nnabata mmanya na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na aka
Igbe nnabata mmanya na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na aka Ezi ọkwa maka igbe mkpọ mmanya, nke kwesịrị ekwesị maka mmanya, Ọ dịkwa mma ka ọ bụrụ onyinye Onyinye nke Mmanya, dị mfe ma ọ bụghị ọnụ ala, Igbe mmanya, eji aka, ọ dị mfe iburu ya ma na-akwanyere ugwu. 1) 17yeri ahuhu ighota ihe di nma na ntukwasi obi. 2) Ihe...
Ejiji ahaziri kaadiboodu akwa uwe akpadoro nke akpukpo ahu
Ejiji ahaziri kaadiboodu akwa uwe akpadoro nke akpukpo ahu Igbe nnweta nke Scarf, nke nwere ezigbo mma na ezigbo ego mara mma nwanyị. Igbe nkwakọ ngwaahịa uwe, ezigbo onyinye maka uwe elu ụmụ nwoke. Igbe mkpuchi na mkpuchi, ezigbo njiri maka nkwakọ. Chọrọ ngwaahịa dị mma dị oke ọnụ ahịa, gaa n'ihu ma chọta Li yang...
Akwukwo onyinye akpa nri ndi ohuru
Akwukwo onyinye akpa nri ndi ohuru Igbe ihe na-egwu mmiri, ụdị HOT dị mma na ọnụahịa kwesịrị ekwesị, Igbe okuku agbamakwụkwọ, na agbamakwụkwọ, ọmarịcha, ụtọ, ezigbo, Igbe onyinye, maka onyinye nwoke na nwanyị na-alụ nwanyị ọhụrụ, zitere ha ozi kachasị mma. Liyang Paper ngwaahịa co., Ltd bụ ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ azụmaahịa...
Akwukwo nri ndi mmadu na-achapu oriọna na-eme ka akpukpo oku di iche iche
Akwukwo nri ndi mmadu na-achapu oriọna na-eme ka akpukpo oku di iche iche Onyinye Candle Box, okomoko na eme ka ngwa ahia gi karie amara. Igbe ngwugwu na-esi ísì ụtọ, nke ahaziri iche, nwere ike ịme ihe masịrị gị, na-eburu ihe ịchọrọ. Igbe kandụl dọrọ, imewe drawer, pụrụ iche ma mara mma. Chọrọ ngwaahịa dị mma dị oke...
Igbe nkwakọ ngwaahịa bọọdụ mkpọchi igbe na mkpuchi
Igbe nkwakọ ngwaahịa bọọdụ mkpọchi igbe na mkpuchi Igbe mpempe akwụkwọ akpụkpọ ụkwụ, kaadiboodu dị elu, ọ dịghị mfe ịka nká. Igbe onyinye akpụkpọ ụkwụ, adịghị agba agba, ndị ahịa gị ga-ahụ ya n'anya. Igbe akpụkpọ ụkwụ ọ bụla, nke ejiri akara na imewe nke gị, juputara agwa ụlọ ọrụ. Chọrọ ngwaahịa dị mma dị oke ọnụ...
Mbipụta mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ flyer dị ntakịrị maka ụlọ nri
Mpempe akwụkwọ Flyer / Akwụkwọ Mpempe Akwụkwọ dị ala maka .lọ oriri na ọ .ụ .ụ Mpempe akwụkwọ Flyer na nchekwa, ọnụahịa dị ọnụ ala na ụdị dị elu, mbipụta agba zuru oke. Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ, ahaziri iche na ibipụta akwụkwọ, bipụta ihe ịchọrọ. Akwụkwọ mpempe akwụkwọ maka ụlọ oriri na ọ printingụ ,ụ, ụdị...
Igbe ọkpọkọ onyinye ekeresimesi siri ike
Igbe ọkpọkọ onyinye ekeresimesi siri ike A na-eme igbe onyinye a n'ụdị igbe dị mfe: mkpuchi na igbe dị n'okpuru, mana ọ na-adị okomoko site na akwụkwọ mmado CMYK dị elu, ị nwekwara ike ịhọrọ akwụkwọ pụrụ iche ndị ọzọ dị ka akwụkwọ pel, akwụkwọ ederede, akwụkwọ ọla edo na ndị ọzọ. N'otu okwu, ngwaahịa anyị...
Igbe kaadi ozuzo Fancy ahaziri iche maka uwe
Igbe kaadi ozuzo Fancy ahaziri iche maka uwe Uwe uwe akwa, igbe drawer maka nkwakọ ngwaahịa uwe, ịdị elu na okomoko. Igbe eserese, igbe mkpọsa, imeghe dị mfe na imewe pụrụ iche. Igbe onyinye, igbe onyinye maka uwe, edere ya na ntụpọ UV, gbacha gbacha na elu. Chọrọ ngwaahịa dị mma dị oke ọnụ ahịa, gaa n'ihu ma...
Igbe mpempe akwụkwọ mpịachi kraft otu
Igbe mpempe akwụkwọ mpịachi kraft otu Kraft otu igbe, otu mpempe mpempe akwụkwọ kraft mpempe akwụkwọ, ọnụahịa dị ọnụ ala maka ọkwa dị mma maka nkwakọ ngwaahịa. Igbe mpempe akwụkwọ ibe, dị mfe ọlị, chekwaa ụgwọ nnyefe ma dị mma maka ịkwakọ. Igbe mpempe akwụkwọ, igbe a na-ahụ maka ederede egbugbu, Liyang Paper ngwaahịa...